Ukhala ngomasipala onesikweletu sika R106 000 | News24
Ukhala ngomasipala onesikweletu sika R106 000
ISITHOMBE:nokulunga ngobese Izitatimende zesikweletu samanzi uThusi abezithola nyanga zonke zinemali ekhuliswayo , kwesinye isikhathi yehliswe.
UKHALA ngokuxhashazwa umasipala owesifazane wase –Ashdown emva kokuba egixabezwe ngesikweleti sika R106 000 semali yentela yokuhlala (rates), yize ebekhokha zinyanga zonke.
UNkk Teressa Thusi uthi okummangaza kakhulu ukuthi ezintweni abezikhokhela kubalwa kuphela amanzi nentela yokuhlala, njengoba ebesebenzisa ugesi wekhadi.
Uthe yize esezamile kaningana ukuxhumana neziphathimandla zikamasipala, akayitholi incazelo ecacile. Uqhube ngokuthi usizi lwakhe luqale ngo 2012 lapho eqale wathola isikweletu samanzi sika R900 , yize ebehlala namalunga omndeni angaphansi kwesine.
Uthe ngo 2013, sikhuphukile isikweletu samanzi saya ku R1 500, yize ebeqinisekisa ukuthi uyakhokha okungenani uR100 ngenyanga.
Uthe: “Isikweletu samanzi nesentela bezifika ngokuhlukana kodwa bengiqinisekisa ukuthi ngiyakhokha njalo. Kuthe ngisababaza le mali, incwadi elandelayo yokuthelela amanzi ifike isithi nginesikweletu sika R10 000. Ngibe sengibhalela umasipala incwadi, okuyimanje angikakayitholi impendulo. Ngo 2015, le mali ibisikhuphukile yafika kuR14 000. Kodwa kuthe sekuphela unyaka futhi, yaphinde yehliswa yafika ku R4 000 okukhombisa ngokusobala ukuthi bekuqagelwa.”
UThusi uqhube ngokuthi ngoZibandlela wanyakenye kufike abafunda amamitha amanzi, bathola ukuthi imitha yakhe inenkinga njengoba igqibekile, okuphethe ngokuthi bagcine bengayifundanga. “Ekuqaleni kuka Masingana kulo nyaka baphinde bafika , bangicebisa ukuthi kufanele ngithenge imitha elisha ngo R743. Phakathi nenyanga kufike izitatimende ezimbili zamanzi , esinye sithi ngikweleta uR3 527.61, esinye sithi ngikweleta R2 703.47. Kumanje ngididekile ukuthi ikuphi okuyikho, njengoba ngithole nencwadi ethi ngikweleta u R106 000 wentela. Ngikubona lokhu kungukuxhashazwa njengoba kukhombisa ngokusobala ukuthi bayaqagela,” kuphetha uThusi. Kuze kwashaya isikhathi sokushicilela umasipala ungatholakalanga ukuphawula.
49% - 3921 votes
46% - 3635 votes